February | 2016 | AMAPHUPHO
Uma uphupha ubona isihlahla kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma isihlahla sisikhulu namagatsha amaningi kusho ukuthi uyoba nempilo echumile nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi kusho ukuthi uyochuma futhi ubenenhlanhla. Uma ukhwela isihlahla kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa esihlahleni kodwa uzobhekana nenkinga emsebenzini. Uma isihlahla sigawuliwe uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu […]
By info on February 22, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe uzohlupheka ngokwezimali ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi kusho ukuthi […]
By info on February 15, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi izandla zakho zingcolile kusho ukuthi ubhekene nokulingeka ukwenza into embi. Uma zingagcolile nje kuphela kodwa zinamfuka futhi kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezimali ubempofu ngenxa yalento olingekayo ukuyenza. Uma isandla sakho noma iminwe yakho ilimele uzolahlekelwa umsebenzi maduzane futhi uma umuntu enqume umunwe wakho noma isandla sakho kusho ukuthi maduzane uzolahlekelwa yinto oyisebenzele kanzima. […]
Uma uphupha ubona inja kuwuphawu oluhle uma iziphethe kahle futhi ikulalela ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle ilwa noma iphula izinto kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala ikakhulukazi ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma kukhona okuzingelayo okungenzeka ukuthi ukukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Uma ikhonkotha noma iklewula kusho izikhathi zezinkinga emndenini wakho. Uma uphupha […]
By info on February 1, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma […]